Dental Care – Page2– Healthy Life Journal
အံကပ်တပ်ဆင်ထားသူတို့ ခံတွင်းသန့်ရှင်းပြီး အံကပ်ရေရှည်ခံစေဖို့ဆိုရင် . . .
အံကပ်စိုက်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အံကပ်ကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့နဲ့ ခံတွင်းသန့်ရှင်းနေဖို့အတွက် နေ့စဉ်လိုက်နာရမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။ – အံကပ်တပ်ဆင်သူတွေအနေနဲ့ အစာစားပြီးတိုင်း အံကပ်ကိုဖြုတ်ပြီး ရေနဲ့ဆေးကြောပေးပါ။ – ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း အံကပ်ကိုဖြုတ်ပြီး သွားတိုက်ဆေး ဒါမှမဟုတ် ဆပ်ပြာနဲ့တိုက်ပြီး ရေနဲ့သေချာဆေးကြော သန့်စင်ပေးပါ။ ပြီးရင် အံကပ်ကိုရေထဲစိမ်ပါ။ ရိုးရိုးရေထဲစိမ်ပြီး...
သွားတစ်သက်တာ ခိုင်မြဲစေမည့် နည်းလမ်းကောင်းများ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ခံတွင်းသန့်စင်ပြီး တစ်သက်တာခိုင်မြဲစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဖလိုရွိုက်ပါတဲ့ သွားတိုက်ဆေးကို သုံးရပါမယ်။ ကလေးအရွယ်ဆိုရင် ကလေးသွားပွတ်တံ ဒါမှမဟုတ် လက်စွပ်ရာဘာနဲ့ တိုက်ပေးရပါမယ်။ (၂) သွားပွတ်ကြိုးသုံးတာက သွားနှစ်ချောင်းကြားက အညစ်အကြေးတွေသာမက...
သွားဖာတဲ့အခါ . . .
မေး။ ။ ကျွန်တော်က သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သွားဖာတာက နည်းပညာကောင်းနဲ့ ကျွမ်းကျင် မှုရှိရမှာလား။ ရှိရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုးလဲ၊ နည်း ပညာကောင်းနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိရင် သွားဖာတာက ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်သလဲ။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။...
သွားနှင့် ခံတွင်းအတွက် ကောင်းကျိုးရှိသည့် အစာများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးပါတယ်လို့သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ တချို့အစာတွေက သွားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းမွန်စေတာကို တွေ့ရတာကြောင့် ဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်မှာ သရေစာအနေနဲ့ စား သောက်သင့်တာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ – ရေနွေးကြမ်း ပိုလီဖီနောဒြပ်ပေါင်းပါဝင်တဲ့ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ လက်ဖက်စိမ်း လက်ဖက်ရည်ဟာ...
သွားအစွပ်စွပ်ပြီး ကျဉ်တယ်၊ စပ်တယ် . . .
မေး. ကျွန်တော်ကသက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရှေ့ဘက်ညာရှိ သွားနှစ်ချောင်းကို ပေါ်စလင်သွားတုပြုပြီး အစွပ်နဲ့စွပ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီလိုစွပ်ပြီး တစ်နေ့မှာ ရေပူသောက်လိုက်တော့ ကျဉ်သလို၊ စပ်သလိုမျိုး ရှေ့ဘက်ရဲ့အတွင်းဘက် သွားဖုံးနားမှာ ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့် ဖြစ်ရပါသလဲ၊ စွပ်တာမလုံလို့ဖြစ်တာလား။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတား။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ...
မေး။ ။ ကျွန်တော်က သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးရင် သွားဖုံးနိမ့်ကျမယ်လို့ သိရှိ ရပါတယ်။ အဲဒီလို သွားဖုံးနိမ့်ကျခဲ့ရင် ဘယ်လို ဝေဒနာတွေခံစားရတတ်ပါသလဲ။ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေ သိပါရစေ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ ရပါလား။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့်...
မေး ။ ကျွန်တော်က သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပါးစပ်ထဲကရှိတဲ့ သွားတွေအနက် သွားတစ်ချောင်းကို သွားတုနဲ့ ပြုလုပ်ပြီး အစွပ်စွပ်တဲ့အခါမှာ အဲဒီသွားတုသက်တမ်းက နှစ်နှစ်-သုံးနှစ်ခံပြီး အစွပ်စွပ်ထားတဲ့ သွားတုကိုဖြုတ်ပြီး အသစ်တစ်ဖန်ပြန်ပြီး သွားတု တစ်ချောင်းကို စွပ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒါ ဟုတ်ပါသလား။ နှစ်ရှည်ကြာခံသွားတုရှိပါသလား။ ဦးသန့်ဇင်၊...
သွားကြွေစားပြီး သွားဖာတဲ့အခါ . . .
မေး ။ ကျွန်တော် သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပါးစပ်ထဲက အောက်ရှေ့ညာဘက်ရှိ သွားတစ်ချောင်း သွားခြေပေါ်နေလို့ ဆေးဖြင့်ဖာရင် မမြဲဘဲ သွားကြွေ ကို စားညှိပေးပြီး ဖာမှ ဆေးမြဲပေမယ့်လည်း အဲဒီသွားက ခိုင်မြဲတဲ့ သွားကောင်းတစ်ချောင်းရရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အဲဒါမှန်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမှာလဲ။...
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. သွားစိုက်နည်း ဘယ်နှမျိုးရှိပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. သွားစိုက်တယ်ဆိုတာက မိမွေးတိုင်း၊ ဖမွေးတိုင်းပါလာတဲ့ သွားတစ်ချောင်းချောင်းကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် နုတ်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ လစ်ဟာသွားတဲ့အတွက် ဒီအတိုင်းမထားချင်လို့သွားကို စိုက်ကြပါတယ်။ နုတ်ရတဲ့သွားက ရှေ့သွားဆိုရင် ရှေ့သွားက...